Barlamaanka Puntland oo diiday in dib loo horkeeno…
Sacuudiga ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo loogu talo galay gudashada Cumrada, oo la hakiyay muddo lix bilood ah sababo la xiriira xanuunka coronavirus. Si looga hortago faafitaanka COVID-19, dadka cumreysanaya ayaan taaban doonin Xijrul Aswadka. Masjidka Xaramka oo ah halka ay Kacbadu ku taallo ayaa maalintii la nadiifin doonaa 10 jeer. Sidoo kale dadka ay ka muuqdaan calaamadaha COVID-19 ayaa loo diyaariyay qolal lagu karantiilo. Sacuudi Carabiya ayaa toddobaadkii la…
Ilaa iyo hadda 23,720 muhaajiriin ah oo ay Soomaali ku jirto ayaa ka degay xeebaha Talyaaniga tan iyo bilowgii sanadkaan 2020. Isla mudadaas, sanadkii hore waxaa gaaray 7,633 halka sanadka 2018 ay ahaayeen 21,024. Tiro koob ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Talyaaniga. Seddexdii maalmood ee ugu dambeysay, waxaa soo degay 203 qof (65 Isniin, 95 shalay iyo 43 maanta) taas oo kordhisay tirada guud ee dadka ka soo galay badda dalkeena tan iyo bilowgii bisha oo ay gaareen…
War kasoo baxay Safaaradda Mareykanka ee Itoobiya ayaa lagu sheegay in Xukuumadda Washington ay taageero Militari siisay Dhiggeeda Addis Ababa si ay ugu adeegsato howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Bayaanka Safaaradda ayaa lagu sheegay in Deeqdaan ay isugu jirto Taageero Militari iyo tababarro la siinayo ciidamo Itoobiyaan ah si ay isaga difaacaan weerarada Khatarta ku ah ee Al-Shabaab uga imaanaya. Mareykanka ayaa Itoobiya taageeradaan tooska ah ee uu siiyay ka…
Dabka ka kaca Goobaha Ganacsiga Dhuusamareeb & Dab damis
Kaalin shidaal oo ku taalla meel u dhaw Xarunta Dowladda Hoose ee Dhuusamareeb waxaa saakay qabsaday dab aan la xaqiijin ilaa haatan waxa uu ka dhacay, balse saameyn dhaqaale u geystay dhismo ganacsi oo u dhawaa kaalinta. Dad wata sakeelo lagu shubay carro iyo biyo, Booyaha shaqsiyaadka ganacsatada ay leeyihiin & Dhalinyarada magaalada ayaa ku howlan daminta dabka si uusan u reebin saameyn dhaqaale oo kale. Magaalada Dhuusamareeb malahan Dab damis, waxaana la adeegsadaa…
Dad ka Ganacsada Biyaha laga qaado Magaalada Baladweyne si loogu iib geeyo qoysaska ka barakacay Fatahaadda Wabiga Shabeelle uu ku sameeyay Xarunta Gobalka Hiiraan ayaa looga digay ka gacansiga Biyaha aan Caafimaad wanaagsaneen. Wasaaradda Tamarta & Biyaha DG Hir-Shabeelle ayaa sheegtay in Gawaari Booyado ah lagu qaado Biyo wasaqeysan oo aan caafimaad ahaan u wanaagsan dadka laga qaado Magaalada Baladweyne. Isu duwaha Wasaaradda Tamarta & Biyaha Hir-Shabeelle Cawil…
Howlgal qorsheysan oo ay fuliyeen Ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee DANAB ayay saraakiisha hoggaamineysa ay sheegeen in ay dileen sarkaal katirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa Deegaanka Yaaqbari weyne ee Gobolka Shabeelaha Hoose. Howlgalkaan ayaa dhacay kadib markii Ciidamada DANAB ay heleen xog la xiriirta sarkaalka katirsan Al-Shabaab sidaasina uu ku dhacay waa sida ay hadalka u dhigeen saraakiisha Ciidanka DFS. Dowladda Federaalka ma aysan dhaafsiin xogta howlgalka dilka ah…
Magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta Madaxtooyada waxaa xalay ka furmay shir u dhaxeeya Hogaamiyaha DFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Madax Goboleedyada Hir-Shabeelle, Galmudug, Puntland, Jubbaland iyo Koofur Galbeed, waxaana wehliyay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir. Muqdisho oo uu ka maqnaa Hogaamiyaha DG Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor ayaa xalay fiidkii soo gaaray Caasimadda, waxaana isla markii uu soo degay uu ku biiray wada hadalka heer federal & heer Dowlad…
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo la kulmay Taliyeyaasha Ciidanka qalabka sida iyo laamaha amniga Gobolka banaadir ayaa kala hadlay qorsheyaasha lagu dardar-gelinayo ammaanka, dhammeystirka dib-u-habeynta ciidamada iyo dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada. Eng Rooble oo labo maalin ka hor xilka lawareegay ayaa Talisyada Ciidanka kala hadlay sugida amaanka magaaladda Muqdisho iyo howlgaladda ka socda goboladda dalka ee ka dhanta ah Xoogga Al Shabaab.…
Muslimiinta Suniga ah ee Sacuudi Carabiya iyo Shiicada Iran ayaa sidoo kale ku xayiran dagaallo dhowr ah oo wakiillo ah oo ka socda gobolka, oo ay ku jiraan Yemen iyo Suuriya oo deris la ah. Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa sheegaysa in ay qabatay “unug argagixiso” oo tababar ka helay Ilaalada Kacaanka Iiraan, xarig 10 qof iyo qabashada hub iyo walxaha qarxa, halka Tehran ay leedahay eedeyntu waa “been abuur dhameystiran”. Af-hayeen u hadlay madaxtooyada Sucuudiga ayaa ku sheegay…
Previous 1 … 400 401 402 403 404 … 414 Next